Batrị Na-arụgharị! Enweghị Mgbochi Dị Mkpa
Ị nọ ebe a: Home / Ngwọta Nzuzo / batrị / Batrị Na-arụgharị! Enweghị Mgbochi Dị Mkpa
15 / 04 / 2015 By Roger Pilon Ahapụ a Comment
A mụrụ na 1950 na Setif, Farouk Tedjar gụsịrị akwụkwọ na Institut National Polytechnique de Grenoble. Ọ na-emepụta ntọala Recupyl na 1993. Na 2012, a họpụtara ya maka njedebe nke Onyinye Inventor European. Usoro nchịkwa ya na-eme ka 98% nke ihe ndị batrị lithium-ion dị.
Enweghi otutu usoro ị nwere ike ịchọta na net nke na-elekwasị anya na iji batrị ekwentị. N'elu nke ahụ, ọtụtụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha nile dabeere n'otu ụkpụrụ: batrị ga-agbaze ala iji malite usoro mgbake.
Usoro a, nke Farouk Tedjar na Jean-Claude Foudraz mepụtara site na France, adịghị mkpa ka agbaze batrị ma ọlị. A na-eme usoro mmegharị ahụ na okpomọkụ nkịtị. Ụlọ ọrụ, malitere na 19 afọ gara aga. E nwere ndị ọrụ 24 na France, banyere 50 gburugburu ụwa. Ahịa na 2009 nọ gburugburu 1 nde Euro na 2009; taa ọ bụ gburugburu 4 nde euro.
Dịka mgbe ọ naghị abụ akụkọ ọhụrụ "ọhụrụ", ma usoro batrị ndị a na-emegharị batrị bụ ihe ngwọta dị mma maka obere ala anyị! N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 na-eme, lee ihe ihere!
E nwere ọtụtụ nde na ọtụtụ nde batrị na gburugburu ụwa
A ga-enwekwu batrị dịka mkpụrụ ndụ n'ụwa niile na - ere dị ka onye nzuzu
Nzughari bu uzo aga, obughi nani n'ihi na odi nma maka uwa uwa ma obu n'ihi na enwere ego
Chọta usoro nyochaghachi ihe ngosi dị ala nke nwere ala ala ma ọ bụ obere akara carbon
Ọ dịghị agbaze batrị batrị ... ma ọ bụrụ na o kwere omume
Nhazi na enweghị agbaze batrị
Azụmahịa CO2 dị nta
Mbelata mmetụta gburugburu ebe obibi
Azu uzo ozo
Usoro maka batrị iji mee ihe - Farouk Tedjar na Jean-Claude Foudraz (France)
Nkwekọ Inventor nke European 2012 - Farouk Tedjar (France)
Compagny Web Site - Recupyl
Isi Iyi Na French - Farouk Tedjar, ebe ọ bụ na ị hụrụ ya
Ihe kacha mma gbasara ihe batrị - Otú e si egweri batrị
Documentation – Planet Fixer Library Ọbá Akwụkwọ
Gbara akwụkwọ N'okpuru: batrị Tagged With: France